प्रचण्ड पुत्रीलाई भरतपुरको मेयर बन्नसम्ममा महवपूर्ण योगदान दिएबापत गृह मन्त्रालय पाएका जनार्दन शर्मा अहिले मन्त्रालयभित्रैबाट सुराकी ! प्रहरी हाकिमहरू आपसमै ‘म फलानोको तर्फबाट, तँ कताबाट ?’ « Light Nepal
प्रचण्ड पुत्रीलाई भरतपुरको मेयर बन्नसम्ममा महवपूर्ण योगदान दिएबापत गृह मन्त्रालय पाएका जनार्दन शर्मा अहिले मन्त्रालयभित्रैबाट सुराकी ! प्रहरी हाकिमहरू आपसमै ‘म फलानोको तर्फबाट, तँ कताबाट ?’
कतिसम्म भने, मन्त्री शर्माका ज्वाइँकै अनलाइनमा उनीविरुद्ध समाचार आउने गरेको छ । अनन्तले चाहिँ जनार्दनलाई नभनीकन गृहबाट गर्न खोजेका जे–जे थियो, त्यो पूरा गर्दै आएका छन् । कतिसम्म भने, जनार्दनले मन्त्रालयमा एआइजीको कमाण्ड खडा गरे पनि प्रचण्डले आफ्ना कुरा जनार्दनमार्फत नभई अनन्तमार्फत आउने र त्यो काम गर्नू भनी आइजिपीसहितका अधिकारीलाई भनेका छन् ।
उदाहरणका लागि, अखिल क्रान्तिकारीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि प्रचण्ड र अनन्तका साझा उम्मेदवार रञ्जित तामाङ थिए, उनका विरुद्ध थिए जनार्दनका भाइ अनिल शर्मा । स्वाभाविक हो, जनार्दन चाहन्थे भाइ जिताउन, प्रचण्ड–अनन्त चाहन्थे रञ्जित जिताउन । गृहमन्त्रीले मतगणनास्थलमा दुईजना डिएसपीलाई अलग्गै ड्युटी लगाइदिए । त्यसको बदलामा अर्का तीन डिएसपी पुगे, रञ्जितको पक्षमा । यस्तो थियो कि, चुनाव अखिल क्रान्तिकारीको, धपेडीचाहिँ प्रहरीका डिएसपीहरूको । रमाइलो कस्तो भने, खटिएका प्रहरी हाकिमहरू आपसमै ‘म फलानोको तर्फबाट, तँ कताबाट ?’ भन्दै हँसिमजाक गर्दै थिए ।
त्यसमध्ये प्रदेश नं. २ र ५ का प्रदेश प्रहरी कार्यालय राख्ने ठाउँ अझै भेटिएको छैन । प्रहरी कार्यालय राख्नलाई अरूको जस्तो १०–५ को अफिस भएर पुग्दैन । कम्तिमा सय जनाका लागि व्यारेक, मेस, शौचालय, खेल मैदानजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ ।
त्यहीभित्र हाकिमको बेग्लै, टुवाइसी र अन्य अधिकृतका लागि अलग–अलग निवास र मेसको प्रबन्ध हुनुपर्छ । अहिले केही व्यक्तिलाई राजनीतिक दबाबमा एआइजी बनाउने नाममा गरिएको दरबन्दी स्वीकृतिले कानुनी मान्यता त पायो तर परिचालनका दृष्टिले व्यावहारिक नभएको प्रसंग हालै सम्पन्न प्रहरीको पिसिसी बैठकमा चर्चा चल्यो । त्यस्तै, एसएसपी कमाण्डमा रहने अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई ‘संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय’ नामकरणको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ ।
त्यस्ता युनिट देशभरमा १४ वटा छन् । तर, राज्यले निर्धारण गरेका संघीय इकाइको खाकाभित्र साविकका अञ्चलको हैसियत प्रयोजनविहीन भइसकेको छ । संघीय इकाइभित्र कुन तहको जिम्मेवारी ती कार्यालयले वहन गर्ने भन्नेबारे गृहको प्रस्तावले केही बोलेको छैन ।
उसले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को खण्ड १ को (ङ) मा रहेको व्यवस्थामाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संघीयतामा प्रहरीको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अझै बहस चलिरहेको छ । त्यस्तो बहस निष्कर्षमा नपुग्दै विनातर्क प्रहरी कार्यालयको नाम फेरिएको प्रति प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि छ ।
संघीयतामा प्रहरीको भूमिकाबारे पेश भएको एक प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी महानिर्देशक, प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई महानिरीक्षक भन्ने व्यवस्था गरेर प्रदेशभरि परिचालित हुने सबै प्रहरीको सेवा, शर्तमाथि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रण राख्ने व्यवस्था थियो । यसबाहेकका पनि प्रस्तावहरू गृह र प्रहरी हेडक्वार्टरमा छन् । तर, अहिले एआइजीहरू एआइजीकै नाममा प्रहरी प्रमुख तोकिँदा प्रहरीले प्रादेशिक इकाइलाई उति महŒव नदिएको भनी उच्च अधिकारीबीच विवाद चलिरहेको छ । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ